Edito Mandroso mihemotra
Mandroso mihemotra ny fanapahan-kevitry ny fitondrana ankehitriny. Zava-misy hita sy ren’ny mpanara-baovao rehetra io fa tsy foronina akory.
Teo ny resaka karaman’ny mpiasa izay efa tokony hihoatra ny 2 etsy ariary saingy miandry an’Ambatobevohoka ny rehetra hatramin’izao. Iny indray ny tsipoapoaka fa norarana tsy ho azo apoaka dia azo apoaka tampoka indray, hono. Tsy maintsy midina ny vidin-tsolika, hoy ny filoham-pirenena, ny fiandohan’ity volana ity. Mbola nohamafisiny io tapa-bolana taorian’izay. Nihena tampoka anefa ankehitriny ilay feo avom-pahenterana nilazana an’io raha ny zava-misy hatramin’ny omaly aloha satria dia hoe hifampidinika ary hampiditra io resaka solika io ao anaty lahadinika. Tsy niomana ny ho filoha toy ilay napetrany ihany koa ve ny filoham-pirenena ankehitriny sa mbola mitoetra ihany ireo tarazon’ny tsy fahamatorana nampalaza ny fitondrana 2009 ? Inona no porofo mavesatra fa efa miainga tokoa ny IEM ? Raha misy tokoa ary ny enti-manana hanaingana azy, maninona no mandroso mihemotra lava ny fanapahan-kevitra ?